Ibnb kaNkosazana G - I-Airbnb
Ibnb kaNkosazana G
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguGale
Indawo yam ijikeleze ikona ukusuka kwiigadi zeBotanical, kwaye kufutshane kukho iindawo ezininzi zokuhamba etyholweni, khumbula izihlangu ezifanelekileyo, uhambo lwegalari luhamba nge-2min kunye neendawo zokutyela, iiCaffès kunye neevenkile zabakhenkethi.
Indawo yam ibucala ngokupheleleyo kwindlu enkulu, yikhabhathi yegumbi elinye enegumbi lokuhlambela labucala kunye nekhitshi elincinci kodwa elisebenzayo, kukho amalungiselelo okuba umntu wesithathu ahlale kwibhedi enye ye-trundle, unendlela yakho yokuqhuba.
Sinamahlathi ashinyeneyo asingqongileyo kunye nezikhwenene ezininzi ezinemibala eyahlukahlukeneyo .
Sithanda ukunika iindwendwe zethu ubumfihlo kangangoko kodwa ukuba uziva ngathi incoko sisoloko sikufutshane .
4.84 · Izimvo eziyi-457
Sine 16yrs sihlala apha kwaye siyathanda uxolo nenzolo
Umbuki zindwendwe ngu- Gale
The mt is a great place to explore , we love our little bit of paradise however if your looki…
Sihlala apha, sinokunxibelelana nam ngokuya endlini